The Spanish mobiles na nke kacha mma uru maka ego | Akụkọ akụrụngwa
The Spanish mobiles na nke kacha mma uru maka ego
Ọ bụrụ na ị na-eche eme gị ochie na ekwentị mkpanaaka na na a ọnụ na mma atụmatụ, nwekwuo ike ma nwekwuo nlezianya na imepụta oge a, n'ezie ị tụgharịkwara uche banyere ọtụtụ ụdị. Ma, ị chọpụtala na ụdị ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ndị a sitere na mba ndị ọzọ? Ọ dịghị Spanish mobiles na, ọ dịkarịa ala, ị nwekwara ike ịgụnye dị ka nhọrọ?
Taa, anyị ga-agwa gị nhọrọ nke Spanish mobiles na nke kacha mma mma-price ruru. Eleghị anya ụfọdụ n'ime ha anaghị ada ụda nke ọma, agbanyeghị, ị ga - enwe ike ịchọpụta na ha bụ ndị ọnụ na - ejikwa ihe dị mma dị mma, arụmọrụ dị mma, na ọnụ ahịa a na - anabata nke ga - akpali mmasị gị.
1 Weimei ike 2
2 Ike ekwentị Max 2+
3 Ekwentị Ike Neo 2
Weimei ike 2
Ikekwe site na aha ya ị nwere ike iche na mwekota ahụ apụla na nke a bụ ụlọ ọrụ China ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọwụwa anyanwụ mana mba. Weimei bu otu n'ime ndị na-adịbeghị anya Spanish na-arụ ekwentị mkpanaaka. Dabere na Madrid, ebumnuche ha bụ inye ngwaọrụ dị mma na ọnụahịa dị mma. Ezigbo ihe atụ nke oke mma-ọnụego a bụ Weimei ike 2, smartphone nke e ji ígwè mee ma dị na agba abụọ (ọla edo na oji) nke ejiri nlezianya mee atụmatụ dị larịị.
Ọ na-enye nnukwu 5,2 anụ ọhịa ahụ nwere mkpebi 1280 x 720 na n'ime ya ụlọ a ARM Cortex A53 quad-isi processor na 1,45 GHz soro 3 GB nke RAM y 32 GB nke nchekwa esịtidem na anyị nwere ike ịgbasa ekele ya kaadị oghere microSD ruru 256GB.
Dị ka sistemụ arụmọrụ ya nwere WeOS interface dabere na ya Android 7.0 Nougat. Ma abia n’ihe banyere vidiyo na onyonyo, o na etinyekota ihe a Igwefoto 13 MP kachasị na ụdị foto 14ay a c16 MP n'ihu igwefoto emeziri nke ọma iji nweta ihe kacha mma selfies.
Anyị apụghị ichefu mmesapụ aka ya 4.000 mAh batrị nke ị nwere ike iji ụbọchị ole na ole pụọ na plọg ahụ, na ọrụ ya Tụgharịa n'Aka na-enye gị ohere ịkekọrịta batrị na ọnụ ọzọ.
Ọzọkwa, Weimei Force 2 na-enyekwa nkwado SIM abụọ, n'ihu flash, akara mkpisiaka azụ njikọta dijitalụ 4G, Bluetooth 4.0, GPS / A-GPS, 3,5mm jaak nkwụnye maka ekweisi na ọtụtụ ihe mmetụta nke ị ga-enwe ọ toụ zuru ezu.
Nwere ike ịchọpụta nke ọma banyere ọdụ a na ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-azọpụta a ole na ole euro, ị nwekwara ike na-ahọrọ ndị Weimei ike.
Ike ekwentị Max 2+
Ugbu a, anyị gafere na ụlọ ọrụ sitere na Alicante, nke amaara ama maka ndị na-ekwu okwu ya, ụlọ elu ya na-ada ụda, ekweisi ya, mbadamba ya na ị na-enye ndị na-azụ ekwentị Spanish ihe nwere ọnụahịa dị oke ọnụ ahịa. M na-ekwu maka Energy Energy na ya Ike ekwentị Max 2+, ama ama emepụtara iji nye a "Ahụmịhe mgbasa ozi zuru oke".
Ọ nwere a 5,5 anụ ọhịa IPS HD ihuenyo (1280 x 720 pikselụ) nke dị mma maka ị na-elele ọdịnaya nke ọdịnaya yana gị abụọ Xtreme Sound na-ekwu okwu nke na-enye ike dị ukwuu na ụda dị mma.
Abịa na Android 6.0 Marshmallow dị ka ọkọlọtọ nke 53 GHz ARM Cortex A1.3 quad-core processor na Mali-T720MP2 GPU kwadoro, ha niile so 2 GB nke Ram na 16 GB nke nchekwa esịtidem na ị nwere ike ịgbasa site na a kaadị microSD ruo ọzọ 128GB.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịse foto na / ma ọ bụ dekọọ vidiyo, ị nwere ike ime ya ekele maka ya igwefoto isi na 13 MP Samsung sensor onwem na mgbado na akpaaka na ụda olu ọkụ abụọ; ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ selfies, na n'ihu igwefoto jikọtara ihe mmetụta Samsung 5 MP.
Na mgbakwunye na ihe niile dị n'elu, Energy Phone Max 2+ nwekwara nkwado Dual SIM, Bluetooth 4.0, A-GPS, 4G, Wi-Fi, njikọ njikọ jack 3,5 mm, batrị 3.500 mAh, Redio FM, na ọtụtụ sensọ.
Ekwentị Ike Neo 2
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, ekwentị nwere ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa bụ ọtụtụ ekwentị, ha na-ahọrọ ọnụ maka iji mee ihe ndị ọzọ yana na ha nwere ike iji otu aka. Maka nke a, otu n'ime ekwentị mkpanaka Spanish nke kacha mma maka ego bụ nke a Ekwentị Ike Neo 2, na ee, anyị na-ekpeghachi ika.
N'ihe na-erughị euro 70 ị nwere ike ịnweta ezigbo mma yana ekwentị nwere ike ijikwa, yana 4,5 inch IPS ihuenyo na mkpebi FWVGA (854 x 480 pikselụ) esonyere ihe Xtreme Sound na-ekwu okwu yana, dị ka sistemụ arụmọrụ, Android 6.0 Marshmallow Kwadoro site na 53GHz ARM Cortex A1.0 quad-core processor na Mali-T720 MP1 GPU, 1 GB nke RAM y 8 GB nke nchekwa esịtidem na ị nwere ike ịgbasa na kaadị microSD ruo 128GB na 2.000 mAh batrị.
Na usoro nke onyonyo na vidiyo, Energy Phone Neo 2 na-enye a 5 MP igwefoto isi na autofocus na ikanam flash, na a 2 MP n'ihu igwefoto. Ma ọ bụghị ya, ọ gụnyere atụmatụ ndị yiri ya (Dual SIM, Bluetooth, wdg), ọ bụ ezie na oge a na-esonyere ya ụlọ abụọ ọzọ nke mere na ị na-adịkarị na ejiji.
Ya mere, anyị abịakwute ndị ọzọ kachasị mma Spanish mobiles, na Madrid BQ nke na-enye anyị nke a BQ Aquaris U na anyị nwekwara ike nweta na mbipute Plus y Lite ihe dị ka euro iri abụọ ma ọ bụ karịa n'otu n'otu.
BQ Aquaris U bụ ama nwere 5 inch IPS HD ihuenyo (720 x 1280) na sistemụ arụmọrụ Android 7.1.1 Nougat na ụlọ a Qualcomm processor n'ime Snapdragon 430 1,4 GHz octa-isi na Adreno 505 GPU tinyere 2 GB nke RAM, 16 GB nke nchekwama ọ bụ kaadị kọwapụta microSD ruo 256GB na 3080 mAh batrị.
Ọ nwere a 13 MP Samsung isi igwefoto na-adọ nchọpụta autofocus (PDAF) na 5M n'ihu igwefotoP Omnivision.
Ihe ndi ozo gunyere bu Bluetooth 4.2, GPS, Dual SIM, NFC, 4G
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » The Spanish mobiles na nke kacha mma uru maka ego
Ngwakọta graphene na ọlaọcha nwere ike igbochi ihuenyo ekwentị gị